u-Dale Steyn ukhishiwe kwi-Test yokuqala
u-Dale Steyn ukhishiwe ekuphoseni kumdlalo odlalwayo we-Sunfoil Test bedlala ne-India ngoba ulimale isithende osukwini lesibili lomdlalo e-PPC Newlands ngoMgqibelo. Lomdlali ophosa ngokushesha uhlale kabi kuma-footmarks ngaphambi kwekhefu letiye, emuva kokuhlolwa kutholakale ukuthi ulimale ngaphakathi onyaweni.
Isinqumo sokuthi uzoshaya yini sizothathwa emuva kokukhuluma ne-medical committee ngokuhamba komdlalo.
i-team manager yama-Proteas, u-Dr Mohammed Moosajee echaza: “u-Dale uhlale kabi kuma-foot-holes ngesikhathi ephosa nge-over yesi-18 namhlanje. Lokhu kulimaze unyawo, kwaholela ekutheni alimale i-tissue ngaphansi konyawo ngasesithendeni. Ngeke akwazi ukuphosa kulomdlalo we-Test ngoba kuzodingeka ukuthi alulame amasonto amane ayela emasontweni ayisithupha, okusho ukuthi uzophuthelwa i-series kudlalwa ne-India.”
“Sesithintane nohlinza izinyawo namaqakala abahamba phambili abahlangene ne-medical committee ye-Cricket South Africa ukuthi amubheke kusasa ukusitshela ngemicabango yakhe kuyela phambili. Kubalulekile ukuthi ukulimala okwenzekile futhi okungajwayelekile ngendlela unyawo oluhlale ngayo kuma-foot-holes futhi akuhambisani nomthwalo wakhe wokuphosa noma ukungawulungeli umdlalo.”
u-Pandya ukopela ukuhlasela kwa-AB ukunciphisa ukuhola kwama-Proteas Ukuhlasela okuholwe u-De Villiers kuphindisele ama-Proteas endleleni Ukukhetha iqembu okunzima kakhulu lokhu - u-Du Plessis u-Philander ubuyele emdlalweni Abadlali bakutholile akade bekudinga kumdlalo wokugcina wamalungiselelo – u-Gwavu u-De Villiers ukuphakamisela izithupha ukudlala ngebhola elibomvana Ama-wicket amahlanu ka-Morkel no-Maharaj anqobise ama-Proteas nge-innings Ikhulu lika-Markram nokuhlasela ngebhola elisha kwa-Morkel kubeka ama-Proteas ngaphambili u-Du Plessis uzophuthelwa i-Test ye-Zimababwe; u-De Villiers uzoba ukapteni u-De Villiers uyilungele inselelo yebhola elibomvana u-AB, u-Dale no-Vernon babuyile kwiqembu lama-Proteas le-Test